Sidee shatiga Microstation V8 u shaqeeyaa - Geofumadas
In la caddeeyo, in tani aanay ahayn jajab ah, ayaa kaliya ka jawaabeysa su'aasha qof ka codsaday sida shatiga Microstation V8 la xukumay.
Tani waa habka ganacsi ee Oggolaanshaha waxaa gacanta ku server liisan, taas oo codsi loogu talagalay dadka isticmaala ee Bentley Select hor v8.9 (XM), kaas oo kuu ogolaanaya in aad ka tago computer lagu samaynayo liisanka waxaa maamula; oo waxay keeni qoraalkii XM ka mid ah server la xusho oo ka mid ah. server liisanka Tani waa doorasho wanaagsan, maxaa yeelay waxa ay magalka karaan liisan, haddii aad u tagto inay ka shaqeeyaan offline ama on laptop ah, magalka noqon kartaa tusaale ahaan bishii pro ah ka dib markii in loo baahan yahay in ay usoo celiyaan si aad u cusboonaysiiso liisanka.
Xaaladdan, faylka shati ee mashiin kasta oo kaliya ayaa tilmaamaya cinwaanka kombiyuutarka oo leh mashiinka liisanka lagu rakibay.
Sidoo kale waa faa'iido leh in la haysto liisanka shatiga sababtoo ah waa la maareyn karaa qaab daboolan, si haddii aan shati looma isticmaali karin, waa la heli karaa; server wuxuu maamushaa inta badan ee firfircoon iyo digniin marka ay dhammeeyaan. Tusaale ahaan tani waxay haysataa shati hal (ama wax yar) ee codsi aan si weyn loo isticmaalin, laakiin taasi waxay heli kartaa qof kasta oo shabakada ku jira; waxa aan u oggolaan doonin inay yihiin dadka isticmaala.
Sure, waxaan xasuustaa hal habeen, waxaan u baahannay inaan soo saaro khariidado ay soo saareen codsi vba ah oo qaatay mudo ah, waxaanu furay dhowr dad badan Waqtiyada mareerka ee mashiinka kasta, waxaan ka tagnay geeddi-socodka shaqada iyo ka tagay in la seexdo si karaoke. Ilaa iyo markaas waxaan ogaanay in codsi kasta oo furan uu ahaa liisan cusub, subaxdii kuwa hore u soo kaceen xafiisyo kale waxay ogaadeen inaysan jirin ruqsadaha la heli karo. hehe, hab wanaagsan oo lagu tusi karo in aan sheegnay illaa 3 ... iyo in ka badan tan kaamilada.
Qalab aan ku xirnayn server-ka liisan, Microstation ilaa Björklinger-ka 8.5 ayaa xakameynaya adeegsiga shatiga iyada oo loo marayo jilitaanka degaanka.
Qaab dhismeedka feylka ee Bentley waa:
C: / Barnaamijyada Barnaamijka / bentley / liisaneynta
Oo waxaa jira faylasha liisanka oo ah dukumiintiyo qoraal ah oo leh qadar dherer ah, gudaha waxa ay haystaan ​​waa furaha dhaqdhaqaaqa mashiinkaas, lambarro sida 138.
Barnaamij kasta wuxuu leeyahay fayl kale, tusaale ahaan Microstation waa msv8.lic, ee joqraafiyada msgeo.lic , loogu talagalay geopack geopack.lic iyo sidoo kale dadka kale.
Habkani waa mid aad u weyn, haddii aad xusuusatid Microstation J waxaa loo yeeray msj.lic Microstation SE waxaa loo yeeray ustation.lic, ee Microstation 95 ms95.lic inkastoo wakhtigaas oo la mid ah ruqsad isku mid ah uu maamulay dhowr dalab, waxaan haystay lambarro tiro badan iyo sidoo kale liisamada ArcView haddii aan isku dari karo chicha leh liinta.
Marka Microstation la rakibo, qaybta sharciga iyada oo aan haysan ruqsad liisan, waxay codsanaysaa furaha dhaqdhaqaaqa oo la keydiyo sida wadada liisanka ee faylka 276 kb kaliya licnsmgr.dll taas oo ah:
C: / Barnaamijyada Barnaamijka / bentley / barnaamij / microstation
Faylkan waxa uu u shaqeeyaa liisan shati, taasina waa sababta Bentley loo wali u burcad badeed maxaa yeelay qaangaadiinta denbiyada ah waxay kaliya u socotaa inay badalaan labadan fayl oo loogu talagalay kuwa ku dabaasha internetka waxayna mar hore sameeyeen.
Wixii qoraal ah XM waxaa la sameeyey hab kale ee ku-meel-gaadhka liisanka, halkaas ayaan ku fasirnay maalin kale.
Post Previous«Previous Google wuxuu soo saarey shabakad u gaar ah
Post Next Laga bilaabo koorsada Cadastre, toddobaadka 1Next »
2 ayaa ka jawaabeysa "Sida shatiga Microstation V8 uu u shaqeeyo"
jan niemeijer isagu wuxuu leeyahay:
tokomst wil in wel met deze deze software werken namelijk
Algis A. Calvo isagu wuxuu leeyahay:
Sideen u helayaa liisanka si aan u isticmaalo Microstation V7?